မွေးဖွားရာဒေသ ဂျပန်နိုင်ငံ ဟော့ကိုင်းဒိုး၊ ဆာ့ပိုရိုမြို့ နှစ်သက်သော အရောင် ပန်းရောင်ရင့် သက်တန့်အရောင် (၇)ရောင်
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှစတင်၍ မိတ်ကပ်ပညာနယ်ပယ်တွင် ကျင်လည်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်ပိုင်းမှစတင်၍ Make up ပညာဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ``အပြုံးမျက်နှာ´´ဖြစ်ပေါ်စေမည့် tour ကိုစတင်၍ နယူးယောက် လောစ်အိန်ဂျယ်လိပ်၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ရှန်ဟိုင်းပါရီ စသည့်မြို့များကို လှည့်ပတ်၍ Make up Performance ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ Make up နဲ့ တေးဂီတကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်ကို ပူးပေါင်းအသုံးပြုကာ ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်နည်းပညာနဲ့ Make up Show (Miworderful make up show ~ Make smile) ကို စတင်အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
သူမရဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ နည်းပညာကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူအများအပြား တုန်လှုပ်စေခဲ့ပါသည်။
ထို့အတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်းရှိပါသည်။ ဥပမာ Hokknido Cola HIS.AEON HOKKID Maksumoto Kiyohi megane prince များ၏ event များတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် contents produce ကိုလည်း ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပကပါ စိတ်ဝင်စားနေရတဲ့ သူမဟာ မွေးရပ်မြေ Hokkaido Sapporo မြို့ရဲ့ လူကြိုက်များ အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ STV တွင် တစ်လတစ်ကြိမ်ပါဝင်၍ မိတ်ကပ်ပညာကို ဖြန့်ဝေလျက်ရှိပါသည်။
သူမရဲ့ မိတ်ကပ်ပညာဟာ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ``အပြုံးမျက်နှာ´´ဖော်ဆောင်ပေးမယ့် ဂျပန်ပြည်တွင်း သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများမှလည်း စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေရတဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
Make up tour ဆိုတာကတော့ (miworderful) ရဲ့ ဘ၀အစိတ်အပိုင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါ တယ်။ Miworderful ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ ပန်းရောင် Frame ကိုထောင်၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အထင်ကရ နေရာများ၊ လမ်းများ Live house များ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် ပါဝင်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ခေတ်စားနေသော မိတ်ကပ် စတိုင်လ်ကို Tour up ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်တေးဂီတနဲ့ သရုပ်ပြမှုကို ကြွရောက်အားပေးကြည့်ရှုသူ ပရိတ်သတ်များ ``အပြုံးမျက်နှာ´´ ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ မိတ်ကပ်ပညာကို သရုပ်ပြသွားပါမည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တွင်ပြုလုပ်သော(၁၅)ကြိမ်မြောက် Japan Expo တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ ဟိုကိုင်းဒိုး ဆာပိုရိုမြို့ကခင်းကျင်းပသောပြခန်း [Welcome to Sapporo ]၏ အသိအမှတ်ပြု မိတ်ကပ် ပညာရှင်အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်မိတ်ကပ်များကို ကောင်းစွာအသုံးချပြီး Japan Kawaii မိတ်ကပ်ကို ကြွရောက်လာသော ဧည့်ပရိတ်သတ်များအား သရုပ်ဖော်ပြသကာ Make Smile X SAPPORO SMILEကို ထုတ်ဖော် ပြသခဲ့ပါသည်။
မိတ်ကပ်နှင့် ရုပ်သံကို ပူးပေါင်း၍ ``အားလုံးကို အပြုံးမျက်နှာ´´ ဖော်ဆောင်ပေးမယ့် အခွင့်အရေးပွဲ ? မိတ်ကပ်ခြယ်သပုံကို အတွေ့အကြုံရယူရင်း ``အပြုံးမျက်နှာ´´ ဖြစ်စေမယ့် Make up Tour?
ယခုအချိန်အထိ သူမ၏ ဖြတ်သန်းခဲ့သော မိတ်ကပ်ပညာနှင့် ရုပ်သံတေးဂီတ Lighting များကို အသုံးပြု၍ ပုံမှန်မိတ်ကပ်ရှိုးနှင့် မတူတဲ့ Live Show & Manipulator နဲ့ မိတ်ကပ်ပညာကို ပူးပေါင်း၍ သီချင်းများ movie များ အသုံးပြုကာ တင်ဆက်ပြသသွားမည်။
Shopping mall တွေရဲ့ လေဟာပြင်တွေ Live have hotel များရဲ့ Ballroom စသည့်နေရာကို ပြောင်းလဲ ပြုလုပ်ပါက (Miwa Yokoyama) ရဲ့ မိတ်ကပ်ပညာ၊ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာနှင့်စတိုင်လ်များဖြင့် နေရာအလိုက် သဟဇာတဖြစ်အောင် စီမံထားသော အစီအစဉ်များကို ကြွရောက်အားပေးသော ပရိတ်သတ်များ မငြီးငွေ့အောင် တင်ဆက်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Miwonderful ထံသို့ အကြံပြုစာများ၊ မေးလ်များပေးပို့လိုပါက အောက်ပါမေးလ်လိပ်စာသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
သတင်းမီဒီယာများ၊ အင်တာဗျူးပြုလုပ်လိုပါက အောက်ပါပုံစံကို ဖြည့်စွက်၍ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။